Unathi Tuta – Elitsha
Abahlali bafuna umthetho ube gadalala kwabo baxhaphaza amanina
Bavakalise ukudineka abahlali ngendlela umthetho osebenza ngayo ukuqinisekisa ukuba amadoda axhaphaza abasetyhini ayavalelwa kwaye akayifumani ibheyile.
“Sibulela naluphina uncedo esilufumanayo ukuzama ukukhawulelana nengxaki yabantwana abangaziyo esikolweni ngenxa yokuba besexesheni, siyalwamkela utyelelo lukasekela mphathiswa wezonxibelelwano kweli”. La ngamazwi enqununu yesikolo samabanga aphakamileyo […]
Baqhanqalazela ukungabinambane abahlali base Strand
Ngabantu abathathu abaye bafumana umonzakalo logama ishumi elinesithoba libanjiwe ngamapolisa, kubahlali bengingqi zogobityholo ezingqonge iStrand. Ngomvulo umhla wama24 kweyoMsintsi abahali bangene ezitalatweni betshisa amatayala kuhola […]
Abathunywa ebebephuma kwinkalo ezohlukeneyo nabebethathe inxanxheba kwinkomfa yesithoba yenqwanqwa elijongene nophuhliso e Khayelitsha i Khayelitsha Development Forum (KDF) bavakalise ukungaxoli kwabo yingxelo kanobhala neka nonondyebo. […]
Umngcelele ochasene nokubulawa nokuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana
Ngenxa yokuxhaphaka kweziganeko zokuxhatshazwa kubulawe abasetyhini nabantwana kwilizwe lonke nalapha eKapa, ijelo losasazo lasekuhlaleni iZibonele FM ithathele kuyo ukuququzelela umngcelele wokuhewula nokukhalimela eziziganeko. Kutshanje elijelo […]
Abanini bevenkile abasuka ngaphandle bathi baphila ubomi bentshontsho
Abemi abasuka kwilizwe laseSomalia bathi bayangcungcutheka kwilokishi yase Khayelitsha
Uzakuqhuba nesicelo sakhe sebheyile, umrhanelwa kwityala lokudlwengulwa kuphathwe gadalala ngokwesondo abantwana baseKuyasa.
Ukungabikho kwemingxunya nemibhobho yogutyulo kwindawo zogobityholo ngomnye wonobangela bezantyantyala zezikhukula zemvula kwingingqi zogobityholo kweli leKapa.
Oku kudizwe nguCeba wakwa ward 89 umnumzana uMonde Nqulwana emva kwemvula ekhokelele ekubeni amakhulu abahlali alale kwiholo loluntu kwingingqi yoogobityholo oo BM eSite B. Oka Nqulwana uthi indawo ekulahlwa kuzo inkukuma phakathi kwezindlu zikwanegalelo ekudameni kwamanzi kuba le nkukuma ayithuthwa ngexesha.